Ny fialan-tsasatra nandrasana hatry ny ela no manosika ny fanaovana vaksiny | Vaovao momba ny dia
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fialan-tsasatra nandrasana hatry ny ela no manosika ny fanaovana vaksiny
Ny fialan-tsasatra nandrasana hatry ny ela no manosika ny fanaovana vaksiny
mandrisika ny fanaovana vaksiny ny fialan-tsasatra
Niovaova ny coronavirus COVID-19, ary indrisy fa ny onja fahatelo nanafika an'izao tontolo izao dia nivadika ho matanjaka kokoa noho ny nandrasana.
Vetivety dia voan'ny aretina ny olona, ​​ary matetika dia mafy kokoa.
Hitanay ny olona mahazo karazana areti-mifindra mifandraika amin'ny vavony sy ny fahasarotana amin'ny rafi-pandevonan-kanina, ary ny aretina dia nahatratra ny taonan'ny tanora noho ny teo aloha.
Ny fironana ankehitriny dia tsy mitovy amin'ny hitoviana fotsiny fa fivoarana mampatahotra.
Na dia any an-tampontrano aza ny isan'ny aretina sy ny mety maty raha ampitahaina tamin'ny herintaona lasa izay dia tsy mikoropaka intsony ny olona. COVID Y2Q1 ity, ary efa nanao ny zava-drehetra izahay fa manasa ny virus hisakafo hariva. Fankasitrahana efa nahazatra ny saina ny olona, ​​hoy ny ANIXE Insights ao amin'ny tatitra momba ny Travel Market Trends. Azontsika atao ny misaotra ny volavolan'ny olombelona amin'izany. Rehefa nahatakatra isika fa tsy mandeha na aiza na aiza mandritra ny fotoana fohy ny COVID, dia nandamina ny fiainantsika tamin'ny eritreritra COVID izahay araka ny torohevitra ara-pitsaboana, ny angon-drakitra ara-tantara, ary ny safidintsika manokana, ary ao anatin'izany ny antony mandrisika ny vaksiny.
Ny famokarana sy ny famolavolana ny maro samihafa Vaksiny fanefitra covid nanerana an'izao tontolo izao dia nanome fanantenana ny olona sasany ny hanamboarana haingana ary nampitahotra ny hafa ny sarinà fandraisana andraikitra vaovao manerantany izay misy ny fiainana manokana, safidy ary fahalalahana ara-tsosialy.
Jery ​​todika an'i Chine anio
Ny tantaranao amin'ny aretina / vaksinina dia amin'ny telefaona findainao, tsy ho ela eo amin'ny chips voahidy ao ambanin'ny hoditrao. Misy fakantsary CCTV iray isaky ny olona 2 miaraka amin'ny tanjon'ny 1: 1. Misy rindranasa iray manome loka anao amin'ny fitondran-tena tsara ara-tsosialy ary mampihena ny isa ho an'ny fihetsika ratsy ara-tsosialy (amin'izao fotoana izao, izay ao anatin'izany ny famakiana ny halaviran'ny fiaraha-monina, ny fanesorana ny sarontava na ny fikororohana azy eo ambanin'ny oronao, ny fandrorohana na ny fitsikana eo imasom-bahoaka, ny fikasihan'ny rindrina sy ny faritra hafa izay tsy natokana ho amin'izany tanjona izany, ary ny fako, ankoatry ny hetsika hafa).
Raha tsy misy teboka ampy dia tsy afaka misakafo amin'ny trano fisakafoanana ianao, miantsena amin'ny fivarotana lehibe, mitondra fiara, mandeha amin'ny fitateram-bahoaka, mandeha amin'ny sinema, mandeha amin'ny sidina mankamin'ny toeran-kafa… na mandao ny tranonao aza.
Tsy mimenomenona ny Sinoa. Firenena kaominista izy ireo hatramin'ny vao mangiran-dratsy. 5G kominista fotsiny ho azy ireo ity.